Warar - Meelaha xayawaanku ku dhaqmaan ma shaqeeyaan? —–Beelaha Xayawaan ee ugu Fiican
Korodhka degdegga ah ee milkiilayaasha xayawaanka, dhibaatooyinka sida xayawaanka la dayacay, bisadaha iyo eeyaha baadi ah, xayawaannada wax yeeleeya dadka si joogto ah ayey u muuqdaan. Waa deg deg ururada maaraynta xayawaanka magaalooyinka inay adeegsadaan GPS si ay uga caawiyaan xalinta dhibaatooyinka kala duwan ee xayawaanka keena macluumaadka liita. Intaa waxaa dheer, bisadaha iyo eeyaha waxay leeyihiin taariikh dheer oo caado nololeed duurjoog ah iyo dabeecad wareegaya. Badbaadada dadka lugaynaya iyo xayawaanka rabaayadda ah, waxaa ugu wanaagsan milkiilayaasha inay xirtaan xirmooyinka xayawaanka GPS.
Waa maxay dhibaatooyinka nolosha xalin karaa xayawaanku?
● Way fududahay in la helo xayawaanka la waayey: mar haddii xayawaanka la waayo, milkiilaha xayawaanku wuxuu ka hubin karaa meesha xayawaanku ku sugan yahay iyo hawsha uu u marayo APP-ga wareega. Sidoo kale horay ayaad u sameysan kartaa xayndaab elektaroonig ah oo amniga lagu ilaaliyo. Haddii xayawaankaagu soo galaan ama ka baxo aagga xayndaabka, milkiilaha ayaa heli doona digniin. Dadka ag maraya ee soo qaadaya xayawaanka ayaa heli kara macluumaadka xiriirka milkiilaha xayawaanka iyaga oo iskaanka ku qoraya nambarka QR ee aaladda isla markaana la xiriiri kara milkiilaha xayawaanka wakhtigiisa.
● U fududee maareynta xayawaanka: adoo xiranaya astaamaha xayawaanka rabaayadda ah, waaxaha khuseeya ayaa dejin kara nidaam maareynta macluumaadka xayawaanka ah oo kormeeraya tirada xayawaanka, meelaha firfircoon, iyo xaaladda karantiil.
Disputes Asalka khilaafaadka mas'uuliyadda waa la raad-raaci karaa: Haynta xayawaanku waa aqoonsiga kaliya ee aqoonsiga xayawaanka. Mar haddii xayawaanku dhaawacmo ama laga tago, hellayaha xayawaanku wuxuu si dhakhso leh u heli karaa macluumaadka xayawaanka wuxuuna aasaas u siin karaa fulinta sharciga.
Waxaad ka heli kartaa goob-xayawaanno kala duwan oo ku yaal Ihome.
Waad ka eegi kartaa dhaqdhaqaaqa xayawaankaaga APP-ga wareega, oo aad u sameysan kartaa qorshe jimicsi habboon oo loogu talagalay xayawaankaaga si ay uga caawiso inay caafimaad ahaan u koraan.
Hawlaha ugu muhiimsan ee Ihome bisad iyo eyda anti-lumay collar:
Dejinta saldhigga laba-geesoodka ah ee loo yaqaan 'LBS + GPS': marka GPS aan la dabooli karin, xogta waxaa loo geyn doonaa server-ka iyada oo loo marayo meelaynta LBS iyo GPRS.
Device Aaladda tababarka eeyga waxay leedahay shaqo gariir. Maaddaama xayawaanku ay aad ugu nugul yihiin gariirka, milkiilayaashu waxay adeeggan u adeegsan karaan inay ku tababaraan xayawaanka, hagaajinta ciyey xayawaannada, orodka, iyo dabeecadaha kale ee xun si ay u kobciyaan caadooyinka wanaagsan.
Fence Xayndaabka elektarooniga ahi wuxuu dejiyaa nashaadaadka nabdoon ee xayawaanka la korsado. Haddii xayawaanku ka baxo xadka aaminka ah, taleefanka gacanta ee APP ayaa heli doona digniin.
● Raadinta howlaha loo yaqaan 'Radback function' ayaa ka caawin kara milkiilayaasha inay hubiyaan raadkooda taariikhiga ah si markaas ay si cad u fahmi karaan halka xayawaanku ku sugan yahay.
● Markuu qalabku ku yar yahay koronto ama khadka, taleefanka gacanta ee APP ayaa heli doona qaylo-dhaan si loola socdo xaaladda qalabku ku shaqeynayo.
Phone Telefoonka gacanta ayaa meel fog ka maamuli kara LED-ka si marka habeenku soo gaaro aad weli u heli karto xayawaankaaga rabaayadda ah.